गुराँस लाइफको बोनसमा मूल्य समायोजन, कतिमा भयो समायोजन ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » गुराँस लाइफको बोनसमा मूल्य समायोजन, कतिमा भयो समायोजन ?
काठमाडौं - गुराँस लाइफ इन्सुरेन्सको ८% बोनसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मूल्य समायोजन गरेर १ हजार ९९ रुपैयाँ भाउ तोकेको छ । बोनस समायोजनपछि सोमबार गुराँसको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता १ हजार ९९ रुपैयाँमा खुलेको हो । इन्सुरेन्सको औसत आधार मूल्य भने ७४६ रुपैयाँ छ । गुराँसले असार ९ गते वार्षिक साधारण सभा गर्न सोमबारदेखि बुक क्लोज गरेको हो ।
साधारण सभामा ८% बोनस दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, सभामा बोनस वितरणपछि कायम हुने पुँजीमा ५०% हकप्रद ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको जीवन बिमा कोषमा २ अर्ब ७७ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँ छ । गुराँसले २ करोठ ८८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी (वार्षिक) ६ रुपैयाँ ९९ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३९ रुपैयाँ २९ पैसा छ ।